Puntland oo ka walaacsan khataraha al-Shabaab - Sabahionline.com
Puntland oo ka walaacsan khataraha al-Shabaab
Maarso 07, 2012
Madaxda dawlad-goboleedda Puntland ayaa muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin sida ay khataraha al-Shabaab ugu soo kordhayaan gobolka, Shabakadda Warbaahinta Shabelle ayaa Arbacadii (7-da March) werisay. Qodobbo la xiriira
Dhallinyaro reer Puntland ah oo ka soo goostay al-Shabaab
30 dagaalyahaniinta al-Shabaab ah oo lagu dhaawacay duqayn cirka ah oo ka dhacday Gedo Maamulka Puntland ayaa sameeyey horumarro dhinaca amniga ah, balse xagjiriinta xulufada la ah al-Shabaab iyo al-Qaacida ayaa ku gooddiyey in ay gobolka ka abuuri doonaan xaalad ammaan darro iyo colaad, ayuu yiri afhayeenka Puntland, Axmed Cumar Xirsi. Sabtidii, ayay Dableyda Buuraha Golis ee al-Shabaab xulufada la ahi waxay weerarro isxig-xiga ku qaadday ciidamada amniga Puntland, iyagoo halkaa ku diley afar ka mid ah saraakiisha amniga. Ciidamada ammaanka ee Puntland oo dhan ayaa la geliyey heegan buuxa si loo ilaaliyo weerar kale oo ay soo qaaddo kooxda aregaggixisada ah. Xirsi wuxuu sheegay in dawlad-goboleedka Puntland ay ka soo horjeeddo in ciidamada Midowga Afrika la keeno gobolka, isagoo sheegay in aanay dawlad-goboleedku haatan weli diyaar u ahayn faraggelin shisheeye.
March 8, 2012 @ 04:04:28AM
puntland waa muqadas in ay difaacdo wadankeeda cidnana gorgortan kula gali mayso mana doonayso in wadankeeda ay yimaadaan ciidamo shisheeye oo hada carqalad u abuura iyada oo ciidankeedu kor u dhaafay 10,000.mahadsanidiin